Talooyinka Ololaha faleebo ee Emailka, Tusaalooyinka, Tirakoobka iyo Dhaqannada ugu Fiican | Martech Zone
Suuqgeeye ahaan, badiyaa waxaan ku riixnaa dufcado iyo emayl qarax macaamiisheena si aan ugu ogeysiiyo iibka ama aan ula socodsiino badeecadeena ama adeegyadeena Haddii aan horumarsan nahay, waxaan xitaa qeyb ka noqon karnaa oo aan shakhsiyeyn karnaa emaylladaas. Si kastaba ha noqotee, emayllada wali waa la diraa iyada oo ku saleysan jadwalkayaga, maahan macaamiisha. Ololeyaasha emaylka faleebo way kala duwan yihiin maxaa yeelay waa la soo diraa ama la socodsiiyaa iyada oo ku saleysan rukunka, annaga maahan. E-maylka faleebo wuxuu shaqeeyaa - wuxuu abuuraa 3x sicirka guji-ee emaylka caadiga ah ee suuqgeynta
Waa maxay Ololaha Email daadinta?
Ololeyaasha faleebada emaylku waa taxane emayl horay loo qoray oo si otomaatig ah loo sameeyay oo la fuliyo markii macaamiil cusub lagu daro olole kobcin ama macmiil hadda wax ka beddelaya dhaqankooda oo uu bilaabo ololeynta, kor u qaadista, ama ololeynta suuqgeynta iimaylka. E-mayllada waxay ku imaan karaan waqtiyo horay loo sii qorsheeyay ama isbeddel ku yimid hab-dhaqanka macaamiisha, ama labadaba.
Shirkadaha ku fiicnaaday suuq-geynta faleebada waxay soosaaraan 80% iibsi dheeri ah oo ah 33% kharash kayar. Tan dhexdeeda infographic oo ka socda Suugaanta Emailka, Waxay tilmaamayaan dhammaan faa'iidooyinka ay soo diraan emaylka ololeyaasha faleebada ah:
xoogbadane isgaarsiinta iswada kanaalka si aad uhesho oo aad ula xiriirto rajada.
Kartidaada rajo gelin una badal suuq geyn iyo hogaamin aqoon u leh iibinta.
Kordhi cilaaqaadka iyada oo aan toos looga qayb galin bina aadamka.
dhis aaminaad iyo aaminaad waqti ka hor intaanad ku mashquulin hal-ku-dhigga iibka.
riixay TOFU, MOFU, iyo BOFU heerarka oo dhan oo tilmaam rajada qiimaha sare, fursadaha ka-soo-noqoshada rajadaas iyo helitaanka xog kale oo badan.
fududee go'aan qaadashada inta lagu jiro miisaaniyada adag.
Infographic wuxuu bixiyaa aragti ku saabsan talooyinka iyo hababka ugu fiican ee ku saabsan abuurista hogaaminta iyada oo loo marayo marxalad kasta oo ka mid ah qulqulka qulqulka, waxa muunad ah ee hawlgalka ololaha e-maylku u eg yahay, waxyaabaha ay tahay in lagu tijaabiyo ololeyaasha emaylkaaga, qaladaadka guud ee xeeladaha emailka faleebada, iyo kobcinta iyo emaylka ugu dirista hababka ugu fiican.
Tags: email faleeboolole emayl faleeboqulqulka hawlgalka ololaha emaylkasuuqgeynta emailka faleebosocodsiinta shaqada emailkaemaylka shaqada
Foomka rukunkaagu ma shaqeynayo.
Aad baad ugu mahadsantahay inaad nala soo socodsiiso!